Depiote Nicolas Randrianasolo : « Tokony hiala ireo izay mpamingana ny Filoha » -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote Nicolas Randrianasolo : « Tokony hiala ireo izay mpamingana ny Filoha »
14/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Betsaka ny toromarika nomen’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mba hiadiana amin’ny fahasahiranan’ny vahoaka, saingy maro amin’ireo tompon’andraikitra no mihainohaino fotsiny, hoy ny depiote Nicolas Randrianasolo. Ny sasany amin’izy ireny dia lasa vato misakana ny fampandrosoana entin’ny Filoham-pirenena. “Izany minisitra Rolland Ratsiraka izany. Inona moa no mba fiarovana ny Filoha nentin’izany. Tokona hosoloina amin’ny olona izay tena ao anatin’ny Hvm sy afaka miaro ny Filoha”, hoy ny fanazavan’ity solombavambahoaka ity, omaly.
Ao anaty governemanta ao, hoy izy, dia maro ny be tsy handraofana. Rehefa misy trangan-javatra mafampana dia tsy mahasahy mijoro. Ny efa mpiteny ihany no mpiteny. “ Talohan’ny naha minisitra azy dia sahy miteny izy, saingy rehefa ao dia lasa moana tsy mahavita miaro ny Filoha akory. Tsy ao anaty governemanta ihany fa hatrany anaty parlemanta ihany koa. Milaza fa miara-dia amin’ny Filoha kanefa manao zavatra mifanaraka amin’izany. Ny tenako manokana dia mangataka ny handravana io birao maharitry ny Antenimieram-pirenena io, satria tsy mandeha amin’izay izy akory ny antom-pitsanganany”, araka ny fanazavany. Ao anatin’izao volana vitsivitsy hanaovana fifidianana izao, dia fotoana izao hanomezana sehatra ireo tena olon’ny Hvm sy namana tena namana. “ Izay tsy namana aoka izy handraisana fepetra. Maro ireo mpisabaka, ka mangataka izahay mba hanalana ireny olona ireny, satria lasa sakana tsy mampandroso ny fanohanana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina”, hoy hatrany ny depiote Nicolas Randrianasolo.